Vivo IQOO Neo 855: အသေးစိတ်ဖော်ပြချက်များ၊ စျေးနှင့်ထုတ်လွှတ်မှု Androidsis
သူနှင့်ပတ်သက်သောကောလာဟလများသည်လွန်ခဲ့သောအပတ်များကစတင်ခဲ့သည် ဖြစ်နိုင်ချေအသစ် IQOO Neo ကို၏ပစ်လွှတ်။ တရုတ်အမှတ်တံဆိပ်တင်ပြခဲ့သည် ဒီပထမမော်ဒယ် တရားဝင်လေးလအကြာ။ ဒီနှစ်အစောပိုင်းမှာသူတို့တီထွင်ခဲ့တဲ့ဒီအမှတ်တံဆိပ်အသစ်မှာဖုန်းအသစ်။ နောက်ဆုံးအနေဖြင့်ဖုန်းအသစ်ကိုပြောပြီးပြီ။ Vivo IQOO Neo 855 ကိုတင်ပြပြီးပါပြီ။
ဤ Vivo IQOO Neo 855 ကိုပြုပြင်ထားသောဗားရှင်းတစ်ခုအဖြစ်တင်ပြသည်, အသစ်တစ်ခုကို Processor ကိုနှင့်အမျိုးမျိုးသောတိုးတက်မှုနှင့်အတူကြွလာ။ ဒါကြောင့်လွန်ခဲ့သောလများကရောက်ရှိလာခဲ့သောမူရင်းမော်ဒယ်ထက်ပိုမိုအားကောင်းသည်။ ဤဗားရှင်းအသစ်သည်စျေးကွက်ကိုအနိုင်ယူရန်ရည်ရွယ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မြင်တွေ့ရသည့်အတိုင်း၊ အဓိကပြောင်းလဲမှုမှာအတွင်း၌ဖြစ်သည်။ အဖြစ် ဖုန်းရဲ့ဒီဇိုင်းကအပြောင်းအလဲတွေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုမထားပါဘူး, ဒါကြောင့်ဒီနှစ်လယ်ပိုင်းတွင်တရားဝင်တင်ဆက်ခဲ့သောဖုန်းနှင့်တူညီသောဒီဇိုင်းကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့နိုင်သည်။ ဒီ IQOO အမှတ်တံဆိပ်အတွင်းမှာအလုပ်လုပ်တဲ့ဒီဇိုင်း။
1 အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Vivo IQOO Neo 855
အသေးစိတ်ဖော်ပြချက် Vivo IQOO Neo 855
ဒီကိစ္စမှာကုန်အမှတ်တံဆိပ်ကပိုပြီးအားကောင်းတဲ့ဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထားခဲ့ဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ထို့ကြောင့်, ဒီ Vivo IQOO Neo ကို 855 ၌တည်၏ စွမ်းအားအရှိဆုံးပရိုဆက်ဆာကိုသုံးပါ ကောင်းသောစျေးကွက်အတွက်ယနေ့စျေးကွက်အပေါ်။ ဤအခြေအနေတွင် RAM နှင့်သိုလှောင်မှုရွေးချယ်စရာများကိုတိုးချဲ့ပြီးစက်၏ပိုကောင်းသောလည်ပတ်မှုအတွက်လုပ်ဆောင်ချက်အချို့ရှိသည်။ ဤနည်းအားဖြင့်၎င်းတို့သည်လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခွဲခန့်ကတင်ပြခဲ့သောမော်ဒယ်၏စွမ်းအားကိုတိုးတက်စေသည့်ကိရိယာတစ်ခုနှင့်အတူရောက်လာသည်။ ဤရွေ့ကား၎င်း၏အပြည့်အဝသတ်မှတ်ချက်များဖြစ်ကြသည်
ဖန်သားပြင်: ၆.၃၈ လက်မအရွယ် Super AMOLED FullHD + resolution ဖြင့်ဖော်ပြသည်
ရှေ့ကင်မရာ: aperturef/ 16 နှင့်အတူ 2.0 အမတ်
ဘက်ထရီ: 4.500 W Flash Charge နှင့်အတူ 33 mAh
ရှုထောင့်: 159.53 × 75.23 × 8.13 မီလီမီတာ
Processor အသစ်တစ်ခုသည်ဤကိစ်စတွင်အဓိကပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှဖုန်းအသစ်အကြောင်းအသေးစိတ်လွန်ခဲ့သောရက်သတ္တပတ်များကပေါက်ကြားခဲ့သည် Snapdragon 855 ကိုပရိုဆက်ဆာအဖြစ်အသုံးပြုသည်။ ဒါကြောင့်ဒီ Vivo IQOO Neo 855. ဒီမော်ဒယ်လ်ဟာတကယ်ကိုပြည့်စုံလာပြီ။ စွမ်းဆောင်ရည်ပိုမိုကောင်းမွန်စေတဲ့စွမ်းအားပြည့်ပရိုဆက်ဆာ။ ထို့အပြင်ဂိမ်းကစားခြင်းအတွက်ရည်ရွယ်သောအမှတ်တံဆိပ်သည်ဤကိစ္စတွင်အရေးကြီးသောလုပ်ဆောင်ချက်နှစ်ခုရှိသည်။ Multi-Turbo 2.0 နည်းပညာကိုအရည်အအေးအသစ်စနစ်အပြင်ဖုန်းတွင်မိတ်ဆက်ခဲ့သည်။
ဘက်ထရီသည် ၄၅၀၀ mAh ပမာဏအတူတူဖြစ်သည် ယခင်မော်ဒယ်၏အလျင်အမြန်အားသွင်းမှုအသစ်တစ်ခုကိုတွေ့သော်လည်းဤကိစ္စတွင် 33W အလျင်အမြန်အားသွင်းသည်။ ၎င်းသည်အစွမ်းထက်သောကြောင့်ဖုန်းကိုအချိန်တိုအတွင်းအားသွင်းရန်သေချာသည်။ ကျန်သတ်မှတ်ချက်များမှာမူအခြားကင်မရာတွင် 12 MP မှ 16 MP အထိရှိသည့်၎င်း၏ရှေ့ကင်မရာ မှလွဲ၍ မည်သည့်ပြောင်းလဲမှုမျှမရှိပါ။
ဒီ IQOO Neo Snapdragon 855 Edition ကိုဒီလမှာတရုတ်မှာရောင်းတော့မယ်လို့ Vivo အတည်ပြုပြီး ကျနော်တို့စောင့်ဆိုင်းရန်ရက်အနည်းငယ်ရှိသည်, ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တရုတ်မှာအောက်တိုဘာ ၃၁ ရက်မှာတရားဝင်လွှင့်တင်တော့မှာပါ။ ယခုအချိန်တွင်၎င်း၏နိုင်ငံတကာပစ်လွှတ်မှုနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်မရှိပါ။ ပုံမှန်အမှတ်တံဆိပ်ဖြန့်ဖြူးခြင်းကိုမြင်တွေ့ရသော်လည်း၎င်းသည်အာရှရှိအခြားစျေးကွက်များ၌အများဆုံးဖြန့်ချိသော်လည်းဥရောပသို့မရောက်ရှိနိုင်ပါ။
ဖုန်းကိုအရောင်သုံးမျိုးဖြင့်ထုတ်လုပ်ထားသည်, ခရမ်းရောင်, Aurora အဖြူနှင့်အနက်ရောင်နေသော။ မတူညီသော RAM ပေါင်းစပ်မှုလေးခုနှင့်ဤဖုန်း၏အတွင်းပိုင်းသိုလှောင်မှုကိုလည်းတွေ့ရှိရသည်။ ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ Vivo IQOO Neo 855. ဗားရှင်းအမျိုးမျိုးကိုရွေးချယ်နိုင်ပါသည်။
၆/၆၄ GB ရှိတဲ့မော်ဒယ်ကိုယွမ် ၁,၉၉၈ (ယူအက်စ် ၂၅၅) ပြောင်းလဲထားတယ်။
၆/၁၂၈ GB ရှိတဲ့ဗားရှင်းကို ၂,၂၉၈ ယွမ် (ယူရို ၂၉၃ ခန့်) ဖြင့်ရောင်းချမည်။
၈/၂၅၆ GB ရှိသောမော်ဒယ်ကို ၂၃၃၉ ယွမ် (ယူရို ၃၁၁ ခန့်) ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
၈/၂၅၆ GB ရှိတဲ့ဗားရှင်းဟာ ၂,၆၉၈ ယွမ် (အပြောင်းအလဲမှာ ၃၄၄ ခုဝန်းကျင်)
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » Android ထုတ်ကုန်များ » မိုဘိုင်း » Vivo IQOO Neo 855 - ဖုန်း၏အသစ်စက်စက်ဗားရှင်း